Waa kuma tababaraha cusub ee Manchester United? – Bandhiga
Waa kuma tababaraha cusub ee Manchester United?
Kooxda ManchesterUnited iyo maamulkeeda oo maanta go’aan culus qaatay isla markaana xilkii tababarenimo ka raacdeeyay tababare Jose Mourinho ayaa lagu soo warramayaa inay haatan kaliya laba shaqsi kusoo koobtay tababaraha xiga ee ay kooxda u magacaabayso.
Labada tababare ayaa kala ah Laurent Blanc iyo Ole Gunnar Solskjaer iyadoo waliba tababarihii hore ee PSG ee Blanc uu yahay midka ugu cad cad ee booskaas lawareegi kara.
Blanc oo ah daafacii hore ee Man United ayaa soo maamulay xulka qaranka France iyo kooxda Paris Saint-Germain waxaana loo arkaa midka ugu haboon ee booskii Mourinho, Maamulka Red Devils ayaa la fahamsan yahay inay doonayaan in tababaraha ay KMG ka u magacaabayaan uu noqdo shaqsi kooxda kasoo qayb noqday walow ay sidoo kale bar-tilmaameedsan karaan mid aan khibrad u lahayn United.
Sidoo kale weeraryahankii hore ee United ee Ole Gunnar Solskjaer ayaa sidoo kale ku jira liiska balse Blanc ayaa ah murashaxa ugu cad cad ee sida kumeel gaadhka ah ula wareega kara kooxda Old Trafford.
Solksjaer oo wakhti tababarenimo oo xun kusoo qaatay kooxda Cardiff City ayaa la fahamsan yahay inuu kamid ahaa magacyada ay kooxdu doonayso markii uu Mourinho culayska weyn wajahayay bishii October.
Intaa kaddib maamulka kooxda ayaa is dajiyay kaddib markii ay Man United kasoo laabatay hoggaan 2-0 ah guulna ka gaadhay kooxda Newcastle United, Dib u dhaca wakhtigaas iyo hakadkaa ayaa u muuqda mid haatan ah sidiyoo Mourinho kooxda loo daynayay inta hawsha bedelkiisa lagu gudo jiro.
Ugu dambayn, Liiskan labada tababare ah ayuu ka maqan yahay Zinadine Zidane oo ah shaqsi in badan lala xidhiidhinayay booska Manchester laakiin waxa uu u muuqdaa mid aan aqbalayn shaqo kumeel gaadhnimo